Ururka Somali Family Services Oo Kulan Ugu Qabtay Magaalada Garoowe Ururada Maxaliga (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Ururka Somali Family Services Oo Kulan Ugu Qabtay Magaalada Garoowe Ururada Maxaliga (Sawiro)
Waxaa maanta lagu qabtay Xarunta library-ga magaalada Garoowe Kulan ay soo qaban qaabisay Urur maxali ah oo lagu Magacaabo Somali Family Services Kasoo loo qabtay dhalinyaro ka socotay Ururada Maxaliga ee kajira degaanada Puntland.
Kulankaan ayaa ku sabsanaa sidii ay ururada kasoo qayb galay ay usamaysan lahaayeen Dalad dhalinyaro oo lagu magaacaabo Puntland Y Peer Network tasoo ah dalad Kaduwan daladahii hore ee dhalinyarada ee kajiray Puntland.
C/rashiid Cali oo ah Madaxa Somali Family Services ayaa Kulan kaan furay waxaana uu sheegay in kulankaan uu kasoo baxay kulan ay marhore ku qabteen xarunta Library-ga oo loo qabtay dhalinyaro gaaraysa 31-qof oo 28 ay ka socdeen gobolada Puntland halka sadexda kale ay kasocdeen Koonfurta Soomaaliya,waxaana kulaankaa ahaa mid dhalinta lagu baraayay sidii ay iyaga waxa isu bari lahaayeen.
C/rashiid ayaa sheegay in kulaankaas ay kasoo baxday in ay helaan dhalinyarada loo sameeyo Daladan oo ah mid kajirta aduunka oo dhan tasoo ka shaqayan doonta sidii dhalinyarada kabaastigooda loo dhisi lahaa.
Ugu dambeyntii ayuu sheegay in maanta kulankaan ay isugu yeereen ay tahay sidii loo samayn lahaa maamulka dalada iyo qaabkii ay u shaqayn lahayd.
Kulaankan ay soo qaban qaabisay Somali Family Services ayaa waxaa uu socon doono mudo labo maalmood ah.